August 2019 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Backup Tools Computer software PC Software
Maung Pauk at 12:55:00 AM 0
iPhone, iPad, iPod တွေထဲကနေ Data တွေ၊ Apps တွေ အပါအဝင် အချက်အလက်အားလုံးနီးပါးကို Backup လုပ်ခြင်း Restore ပြန်လုပ်ခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ iExplorer ဖြစ်ပါတယ်.. Music, Video, Photo စတဲ့ Media Data တွေ၊ Message, Contact, Call History, Voicemail, Note, e-Books စတဲ့ User Data တွေ၊ Application တွေနဲ့ Application ရဲ့ Data တွေကိုပါ Backup & Restore လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..ဒါ့အပြင် Disk ကိုပါ Mount လုပ်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်.. ၁၉.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့က နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iExplorer 4.3.1 Full Version လေးရထားလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်... Full Version လုပ်နည်းကတော့
ပထမဆုံး Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ.. ( Internet ချိတ်ထားရပါမယ်.). ပြီးလို့ iExplorer Run လာရင် ပိတ်ပစ်ပါ.. Crack ထဲက ဖိုင်လေးကို ဖြည်ချပြီး Copy ကူးပါ..
ဒီ Software ကို Crack လုပ်ရတာ နည်းနည်းတော့ ရှုပ်တယ်ဗျ.. သူက ပုံမှန်အတိုင်း Program File အောက်မှာ Install လုပ်တာမဟုတ်ဘူး.. User App Data အောက်မှာ Install လုပ်တာ.. အောက်မှာ Video ဖိုင်လေးကိုသာကြည့်လုပ်ကြပါတော့ဗျနှော...
(iPhone, iPad, iPod တှထေဲကနေ Data တှေ၊ Apps တှေ အပါအဝငျ အခကျြအလကျအားလုံးနီးပါးကို Backup လုပျခွငျး Restore ပွနျလုပျခွငျးကို လှယျကူစှာ ဆောငျရှကျပေးနိုငျတဲ့ iExplorer ဖွဈပါတယျ.. Music, Video, Photo စတဲ့ Media Data တှေ၊ Message, Contact, Call History, Voicemail, Note, e-Books စတဲ့ User Data တှေ၊ Application တှနေဲ့ Application ရဲ့ Data တှကေိုပါ Backup & Restore လုပျပေးနိုငျပါတယျ..ဒါ့အပွငျ Disk ကိုပါ Mount လုပျပေးနိုငျမှာလညျးဖွဈပါတယျ.. ၁၉.၈.၂၀၁၉ ရကျနကေ့ နောကျဆုံးထှကျထားတဲ့ iExplorer 4.3.1 Full Version လေးရထားလို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ... Full Version လုပျနညျးကတော့
ပထမဆုံး Setup နဲ့ Install လုပျပါ.. ( Internet ခြိတျထားရပါမယျ.). ပွီးလို့ iExplorer Run လာရငျ ပိတျပဈပါ.. Crack ထဲက ဖိုငျလေးကို ဖွညျခပြွီး Copy ကူးပါ..
ဒီ Software ကို Crack လုပျရတာ နညျးနညျးတော့ ရှုပျတယျဗြ.. သူက ပုံမှနျအတိုငျး Program File အောကျမှာ Install လုပျတာမဟုတျဘူး.. User App Data အောကျမှာ Install လုပျတာ.. အောကျမှာ Video ဖိုငျလေးကိုသာကွညျ့လုပျကွပါတော့ဗနြှော...)
Download iExplorer 4.3.1 Full.rar: 9.75 MB